Lixabiso CNC ukujika carbon intsimbi mveliso kunye nabathengisi | Ouzhan
Indawo yokuguqula indawo yokuchaneka ilunge kakhulu ekusetyenzisweni kweentlobo zeendawo zokusebenza ezinje ngamalungu agobileyo kunye nezixhobo ezisebenzisa izixhobo. Iindawo ezigobileyo zisetyenziswa ngokubanzi kumacandelo emizi-mveliso, ezinje ngee-turbine blades, iinqanawa zokuhambisa iinqanawa, iimveliso zeshishini ezinendawo ezijikelezayo zokwenza izinto, njalo njalo. Ngokubanzi, umphezulu ogobileyo uqhubekeka ngokujika.
Isinyithi seCarbon sisinyithi sekhabhoni esinomxholo wekhabhoni oyi-0.0218% ukuya kwi-2.11%. Ikwabizwa ngokuba yintsimbi yekhabhoni. Ngokubanzi, ikwaqulathe inani elincinci lesilicon, i-manganese, isalfure, kunye ne-phosphorus. Ngokubanzi, ukuphakama komxholo wekhabhoni yentsimbi yentsimbi, kokukhona ubukhulu kunye nobukhulu bokuqina kwamandla, kodwa isezantsi seplastikhi. Ukujika kweCarbon yentsimbi ye-CNC kusetyenziswa ngokubanzi kwaye kufanelekile kwiindawo ezininzi zoomatshini. I-Ouzhan iya kulungisa ngokufanelekileyo iindawo zoomatshini ngokwemizobo yakho kunye neemfuno zakho.
Isinyithi i-CNC Turning-Precision Carbon Ivula iiNxalenye zeMachining Centre
Izinto eziluncedo ze-Ouzhan Carbon Steel Ijika Amalungu
Inkonzo yokujika yentsimbi eyenziwe ngeCarbon-China Shanghai CNC intsimbi yentsimbi eguqula iindawo zomenzi
I-Ouzhan ngumzi mveliso wokudibanisa urhwebo kunye norhwebo, ukubonelela ngenkonzo enye yokujika kunye neenkonzo zokugaya umatshini. Ngokweemfuno zabathengi, inokuqhubekisa i-carbon yentsimbi ngokuzinzileyo nangokuthembekileyo iindawo zokujika ezi-CNC. La malungu omatshini enziwa kusetyenziswa eyona mveliso ikumgangatho ophezulu, efunyanwa kubathengisi abaziwayo beemarike. Iqela lethu lobuchwephesha elinamandla kunye nobuchule kunye nolawulo olusebenzayo kunye nenkqubo yokusebenza kunokuqinisekisa ukwenziwa ngokugqibeleleyo kwezahlulo zecarbon zentsimbi ezijika umatshini. Ukongeza, i-CNC yokuguqula iimveliso zentsimbi yekhabhoni zibonelela ngokungqongqo kwimigangatho esemgangathweni kwaye inokusetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo zeshishini. Kwaye sinokubonelela ngokukhuphisana ngeekhabhoni zentsimbi ye-CNC iimveliso ezijika kubathengi bethu abaxabisekileyo.
Ouzhan carbon intsimbi ukujika iindawo machining iindawo eziluncedo
(1) Ukujika kufanelekile ukuqhubekeka ngaphakathi kunye nangaphandle imijikelezo ejikelezayo. Uluhlu machining ukuchaneka ngokujika IT13, IT6, kunye noburhabaxa umphezulu Ra ixabiso 12.5, 1.6.
(3) Ukujika kunokuziqhelanisa okunamandla kubume, izinto eziphathekayo, ibhetshi yemveliso, njl yomsebenzi, kwaye isetyenziswa ngokubanzi. Ukongeza ekuguqulweni kwazo zonke iintlobo zentsimbi, inkcenkce yentsimbi, kunye nesinyithi esingenantsimbi, inokujika izinto ezingezizo zesinyithi ezinje ngeglasi yefayibha, ibhakelite, inayiloni njalonjalo. Kwezinye izinyithi ezingenazintsimbi ezingakulungelanga ukugaya, izixhobo zokujika idayimane zinokusetyenziselwa ukujikajika kakuhle, ezinokufumana ukuchaneka kokulungiswa okuphezulu kunye nexabiso elincinci lendawo yokurhaba.
(4) Ngaphandle komda womhlaba ongalinganiyo ongenanto, ukujika okuninzi kukusika okuqhubekayo kunye necandelo lokunqumla elilinganayo. Ke ngoko, amandla okusika atshintsha kancinci, inkqubo yokusika izinzile, efanelekile ukusika ngesantya esiphezulu kunye nokusika okunamandla, kwaye inemveliso ephezulu yokusebenza.
Izinto eziluncedo Ouzhan carbon sentsimbi ukujika inkonzo
-Zonke izinto ezichanekileyo ze-CNC ezijika iimveliso zentsimbi zecarbon ziphantsi kovavanyo olungqongqo lomgangatho.
-Ngokuya kwimizobo okanye iisampulu zokwenza ngokuchanekileyo iindawo zentsimbi zecarbon.
Egqithileyo Elungiselelweyo ubhedu ngoomatshini ukujika iindawo izincedisi processing